ဇွန်လ 2016 – တေလာ Lopes ツဘလော့
လ: ဇွန်လ 2016
ဆုံးအမှား “Disk ကိုရေး-protected” သို့မဟုတ် “မကောင်းတဲ့ superblock”
သူတို့အားအမှားအယွင်းများသို့ run ဖို့မူလတန်းသလိုပဲတဲ့ Micro SD memory card ကို format ဖို့ကြိုးစားပါ. အိုကေ, အိုကေ… တကယ်တော့သူကမူလတန်းနေဆဲ.
19 ဇွန်လ 2016 တေလာ Lopes	မကောင်းတဲ့ superblock, disk ကိုရေး-protected, Micro SD Card ကို	1 မှတ်ချက်
အင်တာနက်ပေါ်ရှိမြေပုံများအားဝင်ရောက်ဖို့ GPS စနစ် Tracker configure
ဒါကြောင့်သင်ဟာအင်တာနက်ကိုကျော်သင့်ကားကိုခြေရာခံရန်လိုအပ်ပါတယ်, လမ်းကြောင်းသည်အောက်ပါ, Real-time အမြန်နှုန်းနှင့်တည်နေရာ? ဒါမှမဟုတ်စိတ်ကပိုငြိမ်းချမ်းရေးဘယ်မှာတစ်စုံတစ်ဦးကသင့်မိသားစုအတွက် သိ. ရ? ဒီအထဲက Check!
5 ဇွန်လ 2016 တေလာ Lopes	APN, GPRS, ဂျီပီအက်စ်, tracker, tk103, tk103a, tracker	38 မှတ်ချက်များ
မူပိုင်ခွင့် © 2022 taylorlopes.com အောက်တိုဘာလကတည်းက 2012, 3.474.951 ဝင်ရောက်ခွင့်